RASMI: Inter Milan oo la wareegtey Dalbert Henrique Chagas Estevao + Sawirro – Gool FM
RASMI: Inter Milan oo la wareegtey Dalbert Henrique Chagas Estevao + Sawirro
Raage August 9, 2017
(Milano) 09 Agoosto 2017 – Inter Milan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay la saxiixdeen dadabkii bidix ee kooxda Nice jaalle Henrique Dalbert oo ay la galeen qandaraas 5 sanadood ah.
Ninkan Brazilian-ka ah ayaa shalay caafimaadka u maray kooxda Nerazzurri, waxaana la rumaysan yahay inuu kusoo wareegey lacag dhan €20m iyo bareemiyo, waloow uu warsidaha Nice-Matin qorayo €25m iyo bareemiyo.
“Dalbert Henrique Chagas Estevao haatan waa laacib Inter ka mid ah, iyadoo uu saxiixay qandaraas saxnaanaya tan iyo 30-ka Juunyo 2022,” ayay u akhrismaysay farriin lagu daabacay webka rasmiga ah ee Inter.
AC MILAN VS BETIS SEVILLE: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan! (Bonucci oo kabtan ah?)
RASMI: Macallinka xulka Talyaaniga oo qandaraaska loo kordhiyay